बेकम्मा शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा विभाग र जि शि अावश्यक छैन, खारेज भए राम्रो
Khem Raj शिक्षकका लगि हालकाे जस्ताे बेकम्मा शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा विभाग र जि शि अावश्यक छैन, खारेज भए राम्रो ।।। शिक्षकका समस्या समाधान गर्न नया विद्यालय शिक्षक सेवा गठन गरि छुट्टै विद्याल...
पठनपाठनको अवस्था बिगार्ने शत्रु
Suman Ghimire : राज्यकोषको दुरूपयोग गर्दै कथित् शिक्षा सुधार नीति ल्याउने भन्दै विदेशमा फेल भएका,विदेशले परीक्षणका लागि पठाएका नीति नेपालमा लागू गर्ने नै नेपालका सामुदायिक विद्यालयको पठन...
शिक्षा नियमावली ढिलाईमा जिम्मेवार को?
Tilak Kunwar शिक्षा नियमावली ढिलाईमा जिम्मेवार को- शिक्षा मन्त्री ?, नेकपा माओवादी केन्द्र ?, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन ?, एकिकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठन ?, नेपाल शिक्षक महासंघ ( शैक्षिक संवा...
अभिभावकअघि कालो मुख लगाउँछन् शिक्षक
https://www.facebook.com/birbahadur.rai.5?fref=ufi/ अाफ्नाे कमजोरी थाहा पाउलान् भन्ने डरले अभिभावक विद्यालयमा अाउने बित्तिकै कालाे मुख लगाउने कामचाेर शिक्षकहरुकाे हालिमुहालि रहेसम्म सामुदायिक व...
शिक्षकले विद्यार्थीलाई पशुलाई जति पनि माया गरेनौ की !
Thakur Pokhrel गाई भैंसीलाई बेचे पनि भागेर पुरानो ठाउँ आयो भने, आफूलाइ पाल्ने व्यक्ति भेट्दा मायाले कराउँछ । तर वर्षाै पढाएको शिक्षक देख्दा विद्यार्थी भाग्छन् ! भेट गर्न खोज्दैनन् ! कतै हामी शि...
स्थायी शिक्षकको स्ववियुमा मत, हाजिरीमा स्ववियु निर्वाचन बिदा
म स्थायी शिक्षक हुँ । मैले स्ववियु निर्वाचनमा मत हाल्नाको लागि २ दिन विदा लिएँ । के स्ववियु निर्वाचन विदा लेखन मिल्छ ? अव मैले कस्तो विदा पाउँछु?
दलका झोले कार्यकर्ता भन्दा माथि उठून्
घनेन्द्र ओझा कुरो स्ववियु चुनावको- झण्डै दुई दशकअघि म पनि छोटे-मोटे विद्यार्थी नेता थिएँ! नेपालकै ठूलो मानिने रत्नराज्यलक्ष्मी क्याम्पसमा स्ववियु सदस्यको उमेद्वार थिएँ! त्यसबेला क्याम्पसहरूमा...
शिक्षकको फुइँ, तलब राज्यको हिसाब किताब ब्यापारको !
Janardan Pokharel सार्वजनिक विद्यालयको एउटा शिक्षक बढो सानका साथ “मैले व्यावसायिक रूपमा कुखुरा, बाख्रा पालेको छु, होटल पनि चलाको छु । बर्षमा यति आम्दानी गर्छु” भन्दै फुइँ लाउँछ । एउ...
शिक्षक सेवा आयोग नै रोक्दै छ शिक्षक बन्न
विकास गिरी सर्वहारा शिक्षक सेवा आयोगले यो वर्षको लागि अध्यापन अनुमती पत्रको आवेदन अझै मागेको छैन । यसले हजारौं विद्यार्थीलाई शिक्षक बन्नबाट रोकेको छ । अझै लाइसेन्सको आबेदन नमाग्दा अब हुने शिक्...
'भर जन्म गेस पेपरको भर' गरेका प्राध्यापक !
Kiran Bhandari कमलप्रकाश मल्ल, प्रयागराज शर्मा, केदारभक्त माथेमा, श्रीधर लोहनी, रमेश पाण्डे जस्ता गुरुले शिक्षा दान दिने TU मा अब केहि वर्षमा 'भर जन्म गेस पेपरको भर' गरेका प्राध्यापकहरु...
रु. ५००/- मा कक्षा ११,१२ पढाउने लाइसेन्स
रु. ५००/- मा कक्षा ११,१२ पढाउने लाइसेन्स बिक्रीवितरण प्रक्रियामा रहेकोेले चाहिने महानुभावहरुले फागुन ७ भित्र तु. जिल्ला - जिल्लाको पसलमा सम्पर्क गर्नु होला ।जिल्ला- जिल्लाको पसल अनुसार मुल्य केही बढ्न...
शिक्षक महासँघ हात्तिको देखाउने दाँतमात्र
हेपिएको वर्ग शिक्षक नै रहेछ । राज्यबाट सेबा, सुबिधामा र समाजको बचनको तगारो........नेपाल शिक्षक महासँघ हात्तिको देखाउने दाँतमात्र हो ।
शिक्षकहरुको शिक्षणसीप जाँच्न नसक्नु मन्त्रालयको निकम्मापन
Hari Thapa मन्त्रालयको निकम्मापन समयमै पुस्तक पु¥याउन नसक्नुमा होइन । पुस्तकलाई रंगीन बनाउन, यसको जतन गर्न लगाएर वर्षेनी कागजको दुरुपयोग रोक्न नसक्नुमा पनि छ । शिक्षकहरुको शिक्षणशैलीको प्रभावका...
शिक्षकको मासिक तलब : फेसबुकका भित्ता भरेर चौपट
Om Sharma Chapagain शिक्षकले चार चार महिनामा तलब पाउने नीतिलाई सुधारेर प्रति महिना बनाएकोमा शिक्षा मन्त्रालयका जिम्मेवार कर्मचारीले ठूलै उपलब्धी हासिल गरे सरह फेसबुकका भित्ता भरेर चौपट । हुन त...
शिक्षकलाई दाई भन्दा ...
Meghraj Rasaili काभ्रेको कोशीदेखा गाविसमा शिक्षकलाई दाई ! भनेर सम्बोधन गर्दा स्थानीय महिलाहरुले आपत्ति जनाउदै भने - "उहाँ सर (शिक्षक) हो। किन दाई भनेको?" शिक्षक प्रति यस्तो सम्मान देख...